Ciyaaryahan sheegay in Coronavirus looga habaaray Wiilkiisa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Ciyaaryahan sheegay in Coronavirus looga habaaray Wiilkiisa
Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Watford, Troy Deeney ayaa sheegay in dad lasoo xiriiray ay u sheegeen inay jeclaan lahaayeen in cunuggiisa yar uu ku dhaco cudurka coronavirus kaddib markii uu go’aansaday inuusan ku laabannin tababarka.
Deeney ma uusan dooneynin inuu cunugiisa, oo qaba dhibaatooyin dhinaca neefsashada ah “galiyo khatar kale oo dheeraad ah”, wuxuuna sidoo kale muujiyay walaaca ku saabsan inay halis gooni ah wajahayaan ciyaartoyda madowga ah iyo ku kasoo jeeda Aasiya ee laga tirada badan yahay.
Waxaa laga sugayaa inuu tababarka dib ugu laabto isbuuca dambe.
“Waxaan arkay hadallo la ii soo diray oo la xiriira wiilkeyga, dadkuna waxay dhahayeen: ‘Waxaan rajeynayaa inuu wiilkaaga ku dhaco corona’,” ayuu yiri Deeney, oo 31 jir ah.
Previous articleDagaal ka dhacay Ceelasha Biyaha & Maamulka Sh/Hoose oo ka hadlay
Next articleAskarigii dilay Taliyihii Ilalaada Garoonka Boosaaso oo toogasho lagu fuliyay